Забур 106 CARS - Nnwom 106 ASCB
Monna Awurade ase na ɔyɛ;
2Hwan na ɔbɛtumi aka nneɛma akɛseɛ a Awurade ayɛ?
Anaasɛ ɔbɛtumi aka ne nkamfo awie?
3Nhyira nka wɔn a wɔkɔ so bu atɛntenenee,
na daa wɔyɛ deɛ ɛyɛ.
4Ao Awurade, sɛ wohunu wo nkurɔfoɔ mmɔbɔ a kae me.
Sɛ wogye wɔn nkwa a, boa me,
5na manya wɔn a wapa wɔn no yiedie mu kyɛfa,
na manya wo manfoɔ anigyeɛ no mu kyɛfa
na me ne wʼagyapadeɛ no abɔ mu de nkamfo ama wo.
6Yɛayɛ bɔne sɛdeɛ yɛn nananom yɛeɛ no;
yɛayɛ mfomsoɔ na yɛadi atirimuɔdensɛm.
7Ɛberɛ a yɛn nananom wɔ Misraim no,
wɔannwene wo nsɛnkyerɛnneɛ ho;
wɔankae wʼadɔeɛ bebrebe no,
na wɔtee atua wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho.
8Nanso, ne din enti ɔgyee wɔn nkwa,
sɛdeɛ ɔbɛda ne tumi kɛseɛ no adi.
9Ɔteaa Ɛpo Kɔkɔɔ no ma ɛwee;
ɔde wɔn faa abunu mu te sɛ ɛserɛ so.
10Ɔgyee wɔn firii ɔtamfoɔ no nsam;
deɛ ɔtane wɔn nsam na ɔyii wɔn firiiɛ.
11Nsuo kataa wɔn atamfoɔ so;
12Afei wɔgyee ne bɔhyɛ no diiɛ
na wɔtoo nʼayɛyie dwom.
13Nanso, ntɛm so, wɔn werɛ firii deɛ wayɛ
na wɔantwɛn nʼagyinatuo.
14Akɔnnɔ bɛhyɛɛ wɔn mu wɔ ɛserɛ so hɔ,
na wɔ asase paradada no so, wɔsɔɔ Onyankopɔn hwɛeɛ,
15enti ɔmaa wɔn deɛ wɔbisaeɛ,
nanso, ɔde ɔfɔn yadeɛ baa wɔn so.
ne Aaron a Awurade ate ne ho no.
17Asase mu buee na ɛmenee Datan
na ɛsiee Abiram asafo no.
18Egya tɔɔ wɔn akyidifoɔ no mu;
ogyaframa hyee amumuyɛfoɔ no.
19Wɔyɛɛ nantwie ba wɔ Horeb
na wɔkotoo ohoni a wɔde fagudeɛ ayɛ.
20Wɔsesaa wɔn Animuonyam.
Wɔde nantwinini, a ɔwe ɛserɛ nsɛsodeɛ.
21Wɔn werɛ firii Onyankopɔn a ɔgyee wɔn nkwa,
deɛ ɔyɛɛ nneɛma akɛseɛ wɔ Misraim no,
22nsɛnkyerɛnneɛ a ɔyɛɛ wɔ Ham asase so
ne nneɛma a ɛyɛ hu wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ ho no.
23Enti ɔkaa sɛ ɔbɛsɛe wɔn,
nanso Mose a ɔyɛ deɛ wapa noɔ no
ɔsrɛɛ no, dwodwoo nʼabufuo no ano sɛdeɛ ɔrensɛe wɔn.
24Afei, wɔn ani ansɔ asase fɛfɛ no;
na wɔannye ne bɔhyɛ anni.
25Wɔnwiinwii wɔ wɔn ntomadan mu
na wɔannyɛ ɔsetie amma Awurade.
26Enti ɔmaa ne nsa so kaa ntam kyerɛɛ wɔn sɛ
ɔbɛma wɔn atotɔ wɔ ɛserɛ no so,
27ɔbɛma wɔn asefoɔ atotɔ wɔ amanaman mu
na wɔdii afɔrebɔdeɛ a wɔde ama anyame a wɔnni nkwa;
29wɔde wɔn atirimuɔdensɛm hyɛɛ Awurade abufuo
30Na Pinehas sɔre dii agyinamu,
na Awurade sii ɔyaredɔm no ano.
31Wɔde yei yɛɛ tenenee maa Pinehas
wɔ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛnni awieeɛ a ɛbɛba no mu.
32Meriba nsuo ho nso, wɔhyɛɛ Awurade abufuo,
na wɔn enti, ɔhaw baa Mose so,
33ɛfiri sɛ wɔtee Onyankopɔn Honhom anim atua,
na asɛm a wannwene ho firii Mose anomu.
sɛdeɛ Awurade hyɛɛ wɔn no,
36Wɔsomm wɔn ahoni
na ɛbɛyɛɛ afidie maa wɔn.
37Wɔde wɔn mmammarima
ne wɔn mmammaa bɔɔ afɔdeɛ maa abosom.
38Wɔkaa mogya a ɛdi bem guiɛ;
wɔn mmammarima ne wɔn mmammaa mogya a
wɔde bɔɔ afɔdeɛ maa Kanaan ahoni no
39Wɔde deɛ wɔyɛeɛ no guu wɔn ankasa ho fi;
wɔnam deɛ wɔyɛeɛ no so bɔɔ adwaman.
40Enti, Awurade bo fuu ne nkurɔfoɔ;
na ɔkyirii nʼagyapadeɛ.
41Ɔdanee wɔn maa amanaman no,
na wɔn atamfoɔ dii wɔn so.
42Wɔn atamfoɔ hyɛɛ wɔn so
nanso wɔkɔɔ so tee atua
44Nanso ɔhunuu wɔn ahohiahia
ɛberɛ a wɔsu frɛɛ noɔ no;
45Wɔn enti, ɔkaee nʼapam no
na ɔfirii nʼadɔeɛ kɛseɛ no mu hunuu wɔn mmɔbɔ.
46Ɔmaa sodifoɔ a wɔafa wɔn nnommum no
nyaa ahummɔborɔ maa wɔn.
47Gye yɛn, Ao Awurade yɛn nkwagyeɛ Onyankopɔn,
na boaboa yɛn ano firi amanaman so,
na yɛde nkamfo ahyɛ wo animuonyam.
48Ayɛyie nka Awurade, Israel Onyankopɔn,
Momma nnipa no nyinaa nka sɛ, “Amen!”
ASCB : Nnwom 106